Muwaaadin Kenyaan ah oo Loo Heysto Shabaabni-mo oo Maxkamadd Lasoo Taagay – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Muwaaadin Kenyaan ah oo Loo Heysto Shabaabni-mo oo Maxkamadd Lasoo Taagay
Maxkamadd kutaala dalka Kenya ayaa lasoo taagay muwaadin Kenyan ah oo lagu eedeeyay in uu ka tirsan yahay xarakada Al-shabaab sida ay sheegeen masuuliyiinta Maxkamadda.
Karutha Githaiga oo 33 sano jir ayaa lagu helay falkan in uu katirsan yahay Alshabaab iyadoona madaxkamadu ay sheegtay in ay hayaan cadeymo buuxa oo muujinaya safarada uu ugu soo talaabay gudaha soomaaliya.
Xaakim maxkamadda ayaa sheegay in ninkan looga shakisanyahay in uu xubin ka ahaa Alshabab uu sidoo kale booqasho kala duwan kutagay deegaanada Gobolka woqooyi bari Kenya sida, Lamu, Malindi,Garsen,Garissa,Elwak,Mandera, isagoona lagu eedeeyay in uuu qiimeyn kusameenayay suurta galnimada sidii weeraro dhiig badan kudaata uu ugu geysan lahaa deegaanadaasi.
Dhinaca kale Karutha Githaiga oo ah muwaadinkan lasoo taagay maxkamada ayaa garabka ku dhaftay eedeymahaan isagooona sheegay in ay yihiin kuwa been abuur ah islamarkaana gudaha soomaaliya uu uyimid howlo shaqo.
Dhaliyaro badan oo dhalasha ahaan kasoo jeeda dalkaasi ayaa dhowrkii bilood la’lasanaa kuwaa oo looga shakisan yahay in ay kubiireen Alshabaab.